Dibad baxyo Rabshada wata oo Maanta ka dhacay Baladweyn iyo Ciidamada Dowlada oo Rasaas ku furay Dibad baxayaasha | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Dibad baxyo Rabshada wata oo Maanta ka dhacay Baladweyn iyo Ciidamada Dowlada...
Dibad baxyo Rabshada wata oo Maanta ka dhacay Baladweyn iyo Ciidamada Dowlada oo Rasaas ku furay Dibad baxayaasha
Waxaa Maanta Magaalada Baladweyn ee Xarunta Gobolka Hiiraan, ka dhacay dibad bax rabshada wata oo ay dhigayeen qaar kamid ah Shacabka ku dhaqan Magaaladaasi oo ka careesnaa Xariga Maamulka Gobolka Hiiraan u geesteen nin wariye ah.
Dibad baxayaasha ayaa ka careesnaa Xariga Maamulka Gobolka Hiiraan u geesteen Wariyaha Soomaali Chanel TV ee Gobolka Hiiraan Cismaan Aadan Carees , waxa ayna dibad baxayaasha tuurayeen dhagxaan waxa ay sidoo kale xireen qaar kamid ah Wadooyinka Magaalada Baladweyn.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ee kusugan Magaalada Baladweyn ayaa dibad baxayaasha ku furay rasaas si xoog ahna ku kala eryay, waxaana rasaasta ay fureen Ciidamada Dowlada ka dhashay dhaawaca hal qof oo rayid ah.
Maamulka Gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in ay amreen Xariga Wariye Cismaan Aadan Carees, oo Maamulku ku eedeeyay inuu tabiyay Wareysi uu ka qaaday mid kamid ah raga sheegta in ay yihiin Gudoomiyaha Dhalinyarada Gobolka Hiiraan.
Maamulka Gobolka Hiiraan wali kama aysan hadlin xariga Wariyaha loo geestay iyo dibad baxa rabshadaha watay ee Maanta ka dhacay Magaalada Baladweyn, waxaana socda dadaalo lagu doonayo in xabsiga looga sii daayo Wariyaha xiran.